posted by abdi @ 2:30 AM 50 comments
posted by abdi @ 10:21 PM 2 comments
Waa sidee dhaqanka Soomaalida ku nool reer galbeedka?
Soomaalida ku nool Kismaayo iyo kuwa ku nool Zeylac amaba Hargeysa ama Muqdisho inkastoo ay waxyaalo badan wadaagaan haddana labo mid ayay si run ah uga siman yihiin, diinta islaamka oo aysan si run ah ugu dhaqmin ama ay magac ahaan u haystaan iyo qabiilka oo dhiiggooda ku shaqeeyo,Soomaalidii qurbaha ama reer galbeedka u soo qaxdayna labadaas arrimood ayay labo kale ku soo darsadeen . “Been xad dhaaftay in ay sheegaan, si ah khiyaano ah ama in ay xaaraan quutaan”
Markii aad timaadid waddamada reer galbeedka waxaa qasab ah in lagaa qaado wareysi ku saabsan waxa kugu kalifay in aad waddankaagii ka soo haajirto ama ka soo qaxdo iyo wixii dhibaato ah ee shaqsi ahaan lagu soo gaarsiiyay,waana sharci u yaala waddamaas in ay helaan sabab macquul ah si ay qofka ku siiyaan oggalaansho in uu ku noolaado waddankooda,waana sharci dunida u yaala oo ay qaramada midoobay dagaalkii labaad ee dunida sidaas ku go’aansaday, laakiin waxay masiibo ka dhacday dadkii Soomaalida ahaa iyagoo intooda badan laga yaabo in ay run ka tahay in ay waddankooda ka soo haajiraan nabad la’aan darteed ay been shubaan taas oo dambi weyn ka soo gaaro.
In been laga sheego magaca qofka,carruur aysan dhalin yiraahdaan waan dhalay iyo in la qaldo magaca aabbaha waa wax ka caadi ku ah dad badan oo Somaaliyeed isla markaana islaam sheegayana, haddaba Soomaalidii ku noolayed wadamada reer galbeedka markii la siiyay degganaansho,guryo ay ku noolaadaan,waxbarasho iyo in loo oggolaado in ay shaqeystaan ayay intii ay Ilaahay Subxaanahu Watacaalaa ku mahdin lahaayeen sida uu addoomahiisa ugu saqiray ku dhaqaaqaan sidii ay wax u dhaci lahaayeen ama u sheegi lahaayeen been ay wax ku dhacaan waliba been keliya ma oran karnee waxay ku kacaan denbi aad u weyn denbigaas oo ah waxa ay ugu yeeraan kala noolaanshaha ama waxa loo yaqaano separateka.
Waa maxay kala noolaanshuhu ama separateka?
Kala noolaanshaha waxa uu u kala baxaan laba nooc:
1- Midka ugu khatarsan uguna denbi badan inkastoo aysan is dhaamin labada noocba ayaa ah: In wiil iyo gabar Soomaali ah isku guursadaan waddamada reer galbeedka ah,waddamadaas ay isku guursanayaan waxaa yaala sharci ah in dowladda hoose laga soo diiwaan geliyo ama loo sheego guur kastoo dhaca si labadaas qof loo ogaado in ay sharci isku yihiin,loolana dhaqmayo sida dad xaas ah oo kale,hal meelna ku wada noolaadaan lacagta iyo qarashka soo galana ay wadaagaan iyo haddii ay carruur isku dhalaan loo siiyo magaca aabbaha dhalay loolana dhaqmo sharciyada carruurta guurka sharciga ah ku dhalata.
Meeshii laga doonayay in ay iska soo diiwaan geliyaan wiilkii iyo gabadhii Soomaaliyeed ee is guursaday ayay afkooda xirtaan meelna aysan iska soo diiwaan gelinaynin,taas macnaheeda waxay tahay in loola dhaqmo gabadhii wax guursatay sidii gabadh aan wax guursan oo kale, midda kowaad waxaa meeshii si aan shaki ku jirin uga baxaya ninkii wax guursaday oo habayaraatee aanan sheegan karin in uu gabdhan qabo haddii ay wax dhashana ma sheegan karo ilamhaas in uu dhalay,gabadhii ayaa kuu soo hartay,iyadana waxaa loola dhaqmaya sida hooyooyinka sharci la’aanta wax ku dhala ama af Soomaali haddii aan ku jilcino wacallada ama garacyada oo kale waayo gabdhan ayaan sheegan in uu nin qabo,carruurta ay dhashana waxaa loogu abtirinayaa iyada oo waxaa la siinaya magaca aabbaheed,waayo iyada ayaaba oranaysa waxaan ilmahan ku dhalay sharcidarro xitaa ma oran karto waxaan ku dhalay saaxiibtinimo waayo saaxiibtinimada xitaa waxaa la sharciyeeya oo la ogaada in ilmahan ay iska dhaleen labo qof oo wada nool yasan is qabine,inkastoo uu magaceeda wato ilmahaas haddana waa in ay maxkamad la kortaa ama la martaa sidii iyada xitaa loogu sharciyayn lahaa oo uu oggolaansho siiyo ninkii ay ku sheegtay in uu saaxiibkeed yahay,isku soo wada duub ilmaha aan sharci dowladeed ama guur ay dowladdu og tahay ku dhalanin dhibaato weyn ayaa lala maraa sidii looga diiwaan gelin lahaa waddanka uu ku nool yahay .
Maxaa ku kalifaya dadkan Soomaaliyeed in ay sameeyaan denbiga sidaas u weyn isla markaana ay carruurtooda ku tilmaamaan kuwo aabbe laawe ah?
Jawaabta su’aashu aad ayay u fududdahay,waxayna tahay in ay helaan xoogaa yar oo lacag dheeraad ah,iyagoo aan dan ka lahayn in lacagtaasi ay xaaraan tahay iyo in kale,lacagtaasi waxay ku helayaan marka ugu horraysa lacagtii ay qeybsan lahaayeen labada xalaasha isku qabta ayaa midba gooni u qaadanaya,wiilkii wax guursaday ayaa xor u noqonaya wixii uu shaqeysto ama caydh ku helo,gabadhii iyadana sidoo kale wixii soo gala xor ayay u tahay gaar ahaan caydheeda ama lacagta ay siiso dowladda,haseyeeshe waxaa taas daba socota in uusan weligiis aabbu sheegan karin ilmahan haddii ay hooyada ilmaha dhashay dhimato waxaa dhici karta in ay dawladdu ilmahaas qaadato oo korsato sida marar badan dhacdayba mana ku dhaco in uu soo sheegto,haddiise la xisaabiyo lacagtaas foolxumada iyo denbiga lagu helayo waxay ku biyo shubataa khasaare,haseyeeshe waxaa la halaajinaya ilmaha yar oo lagu quudinayo lacag aan xalaal ahayn isla markaana haysanin aabbihii loo nisbeyn lahaa.
Nooca labaad ee kala noolaanshaha ama separateka
Nooca labaad ayaa ah waaliddiin markii ay waddamadan soo gelayeen u sheegay dowladda in ay is qabaan carruurtii ay markaas wateena loo aqoonsaday in ay iyaga dhaleen oo aabbaha loogu nisbeeyo sida islaamku aaminsanyahay,haseyeeshe muddo kadib waxay la soo baxaan beentii iyo khiyaanadii ay ka barteen kuwii ka horreeyay,waxayna dowladdu u sheegaan in ay is furayaan si ay lacagta mid walba xor ugu nqodo oo uu lahaado daqli gooni u ah,sidii ay sameeyeenba kuwii ka horreeyay,sidaas ayayna ku noolaadaan inti ay doonaan,waxayna ku noolaadaan dhuumasho iyo shaki aan yarayn iyagoo ka qaba in la soo qabto ama la soo ogaado,haddii inta ay kala nool yihiin ilmo dhasho labo arrimood ayay dowladdu ka yeesha in ilmihii yaraa lagu qoro magacii carruurtii walaalahiis ahaa ee ka weynaa oo la siiyo magaca aabbaha ama in la siiyo magaca hooyada..
Aqoon kororsi gaaban oo ku saabsan kala noolaanshaha ay Soomaalidu reer galbeedka dhaqan ka dhigteen.
1- Ma ogtahay waddanka Ingiriiska in ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan kala noolanshaha,waxaaba la sheegaya in ka badan 80% ay separate ama kala nool yihiin iyagoo carruuro isku leh,waxaa kaloo la sheegay in ay dad isku sheegay in dadkaasi intooda badan ka muuqato calaamadaha islaamnimada oo ay wataan dharkii islaamka,tukadaan,waddanka Canada Soomaalida ku nool ayaa ku jirta lambar labaad,halka Holland 3aad ay haleeshay waddamada Iskandanefiya iyo Australia ayaa 4aad isku hasyta ama wada qeybsaday.
2- Ma ogatahay in ay haweenka intooda badan mas’uul ka yihiin badanaa arrintan kala noolaanshaha,ragga Soomaaliyeed ayaan wax saameyn ah ku yeelan karin hadba sida ay rabto in ay u noolaato haweentiisa,laba kala daran la kala dooro ayaa u taala ragga, in uu iskaga tago ama uu ku raaco falkan denbiga ah,nasiib xumo waxa uu doorta inta badan midda dambe oo ah in uu dambiga la dhex yuunbado.
3- Ma ogtahay oo kale in ragga kala noolaanshaha ku nool aysan shuqul ku lahayn waxa ay haweenkooda walaaqayaan ama sameynayaan haba u badnaadeene dhinaca dhaqaalaha,mase ogtahay in ay haweenkaas raggooda aysan uga harin wixii lacag ah ee uu goonidiisa u helay?
4- Ma ogtahay oo kale qoysaska kala noolaanshaha ku nool ay u faanaan waa dhinaca dhaqaalaha kuwa yar ee xalaasha quuta,ayna ku eedeeyaan xalaal quudatada had iyo jeer in aysan lacag u dirin ehelka ku nool waddankii hooyo,dhaqamada dadkaas waxaa ugu weyn istus iyo ha la i arko ay wax ku bixiyaan,iyagoo aan habayaraate aan dareemin in ay Alle denbi ka galeen,meeshii ay xishoon lahaayeene galo kibir iyo isla weyni.
5- Ma ogtahay oo kale in dadka ku nool kala noolaanshaha uu ku dhaca fashilka ugu badan ee ku yimid qoysaskii Soomaaliyeed ee reer galbeedka ku noolaa,taasna waxaa sababay labadii is qabtay oo aan habayaraate is-haysan iyo masiibo kale oo Rabaani ah.
6- Ma ogtahay in lacagta Soomaaliya loo diro inta ugu badan la soo dhaco ama sharcidarro lagu tabcado,waxaana adag in qof ku nool reer Galbeedka uu guryo ka dhisto Soomaaliya, waayo lacagta halkan laga sameeyo inta badan ma soo dhaafto quutalyoomka ama wax lagu noolaado.
posted by abdi @ 6:20 PM 0 comments
Horaa loo yidhi qof kastaa wuu cadhoon karaa bals inaad cadhadaada xadayn kartid maaha wax fudud. Marar badan ayaynu wararka aynu ka maqalaa dilal fool xun oo dhacay oo ka bilowday qof cadhadiisa xadayn kari waayay. Tusaale ahaan laba qof oo hadal is waydaarsaday oo midkood baskoolad ama qori soo qaatay oo uu bilaabay inuu rasaas ooda kaga qaado dadkii meesha joogay ayaynu wararka ka maqalaa. Suáashu waxay tahay maxaa qofkan maskaxdiisa qaaday? mudo kadib haddii aad jeelka ku waraysatid mid ka mida dadka dilalkan lama filaanka ah galaya oo aad waydiisid sida uu u fikirayay marka uu dilkaas gaysanayay waxa kaaga soo baxaysa jawaab layaableh “Ismaan kala ogayn meel aan marayay iyo waxaan samaynayay”. Tusaalahani waxa uu ku tusayaa in ay maskaxdeenu leedahay laba hab oo ay u shaqayso: Habka fikirka iyo habka dareenka (emotional/rational).
Qoraaga caanka ah Dr. Daniel Goldman oo ah joornalis ka soo baxay jamacada Hardford markii dambena ku takhasusay cilmiga nafsiga ayaa baadhitaan dheer oo uu sameeyay waxa uu ka qoray 1996 buug aduunyadoo dhan caan ka noqday oo la yidhaa Emotionele intelligent. Daniel buugiisan waxa uu ku sheegay in fahmada waxbarashada (IQ) oo qudhaati aanu ahayn ka qofka u haga horumarka. Imtixaanka IQ waxa uu wax ka sheegaa horumarka uu ilmahu xaga tacliinta ka gaadhayo. IQ inta badan waa dhaxal waalidka laga dhaxlo, tacliinta aynu iskuulada ku dhiganaana inta badan waxay korisaa oo qudha IQ, balse arday badan oo IQ sare kaga baxay iskuulada ayaa nolosha ka dambaysa aan horumar wayn ka samaynin dhinaca shaqada, la dhaqanka dadka iyo xidhiidhka qoyska iyo bulshada ku xeeran. Daniel waxa uu buugisa ku sheegay inaan IQ sare oo qudhaati aanu ku filayn guusha uu qofku ka gaadhayo xaga nolosha balse uu qofku u baahanyahay horumar xaga Emotionele intelligent ka ah (EQ).
Qoraagu buugan oo ka kooban shan qaybood waxa uu si qoto dheer ugag hadlay qodobadan:
Siday ay maskaxdeenu u shaqayso iyo sida ay xarumah dareennada kaladuwan ee maskaxdu u kala qaybsanyahiin. Wuxuu sharaxaan dheer ka bixiyay xaruma maskaxda ee xukuma dareenka subkoonishen oo ah qaybta hoose ee maskaxda ahna xarunta xukunta dareenada cadhada, murugada, warwarka, jacaylka, farxada iwm. Qaybta sare oo ah maskaxda fikirta (rational mind) oo ku shaqaysa hab xisaabtan iyo loojiko ah oo uu qofku si toosa u xukumo. Balse qaybta hoose ee maskaxda qofku si toosa uma xukumo, haddii aanu baranin xarfad iyo khiyaamo aad ku gashid albaabka maskaxhoosadka (emotional mind). Xarfadaa iyo hab khiyaamadkaa uu qofku ku xukumayo maskaxhoosadka dareenka ayaa ah ta dadku ku kala badiyaan. Qofbaa cadhadiisa iyo dareenkiisa warwarkalehi si dhibyar uu u afduubaa oo maskaxdiisa fikiraysa laga xoog waynaadaa, halka midkalena uu arintan si aan toos ahayn u hor istaagi karo. Habdhaqanka ka dhexeeya qofka iyo maskaxdiisa qaybta dareenka iyo fahhanka uu qofku u leeyahay dareenadiisa kala duwan waxa uu qoraagu u bixiyay Emotionele intelligent (EQ). Waxanay aqoonyahanada cilmu nafsigu imika sheegeen inuu qofku u baahanyahy IQ iyo EQ sareeya si uu horumar wayn nolasha uga gaadhi karo.
Waxa cad in dareenka qofka ee cabsida, cadhada iwm ay leeyahiin shaqo ay qofka u qabtaan. Tusaale ahaan cabsidu waxay marar badan kaaga digtaa khatar kugu soo fool leh oo waad ku badbaadaa, balse marar kale oo badan cabsidu waxay xayiraad ku noqonaysaa maskaxdaad shaqadeedii, tusaale ahaan dareenka cabsida ah ee kugu yimaada markaad leedahay wadahadal shireed oo mihiima ama qudbad aad meel ka jeedinaysid wuxuu naftaada ku sameeyaa xayiraad farabadan iyo inay maskaxdaadii fakaraysay ay si fiican u shaqayn kari waydo.
Maadaama aynaan inagu si toosa u xukumin maskaxda wada dareenkeena oo ay si aan toos ahayn uga amar qaadato fikirka ka dhex socda maskaxdeena sare (rational mind), waxa ay dadka bina aadmaga ahi ay inta badan isku mashquuliyaan hawlgalo ay ku qancinayaan (sasabayaan) maskax hoosaadkooga sida daawashada filimaanta, tagina xafladaha, dhagaysiga muusiga iwm, waxa kale oo ay dadku sameeyaan inay isticmalan walxo kiimiko ah oo ay ku sasabayaan qaybtan maskaxada sida khamriga iyo daraaga kala duwan.
Wada shaqayta ka dhaxaysa labada qaybood ee maskaxdeena inta badan dhibaato kama dhex aloosna oosi wada jir ah ayay u wada socdaan, balse marka xaaladu ay adkaato mida hoose ayaa isku dayda inay maroorsto hogaanka maskaxda fikiraysay. Afduubkaa maskax hoosadku waa ka sababa ayay leeyahiin aqoonyahanda baadhista sameeyay dhibaatoyin badan oo caalamka ka dhacaya. Sida uu qofku isaga badbaadin karo afduubkaasi waxa ay ku xidhantahay Emotionele intelligent ka qofka.
Baadhitaan uu sameeyay Dr Salovey waxa uu ku soo koobay si uu qofka loo odhan karo EQ wuu fiican yahay waa inuu shan qodob horre uga maray:
1- Waa inuu qofku aqoon u yeeshaa dareenadiisa kala duwan iyo sida ay u shaqeeyaan, garana karaa goorta ay dareenadaasi kacaan ama kacsan yahiin.
2- Qofku waa inuu dareenkiisaa leexleexinkaraa waddano uu isagu u jeexi karaa. Waxa ayno hore u soo sheegnay inanay suurto gal ahayn in wakhtiga uu dareenku wax afduubo inay shaqayso maskaxda fikiraysaa, sababtaa awgeed waa inuu qofku bartaa xarfad uu ku hor istaagi karo dareenkiisa.
3- Dhamaan dareenada maskaxdeenu maaha ku jar inaga ridaya balse qaar ka mid ahi waa hogaanka inoo horseeda dadaalka, firfircoonida aynu shaqo ku qabano. Qofku waa inuu bartaa hab uu ku xukumi karo dareenada u hogaaminaya dadaalka(Zelf motivation).
4- Qofku waa inuu fahmo u leeyahay dareemada qofka kale maskaxdiisa ka socda (empathie). Qodobka ugu mihiimsan dad la dhaqanku waa dareen kala qaadashada labada qof ka dhaxaysa. Haddii uu qofku dareenkiisa uu xajin karana waxa uu fahmo dheerada u yeelankaraa dareenada dadka ku xeerran.
5- Qofku waa inuu dad la dhaqan leeyahay, bulshada ku dhex jira ku fiican fahanka dadka kale hogaamina karaa waxno ka dhaadhicinkaraa.
Shantan qodob ayaa wakhtigan casriga ah ay aqoonyahanda cilmi nafsigu ay aasas uga dhigeen in qofku oo noqon karo mid leh awood EQ oo saraysa. Waxaana la sameeyay imtixaano lagu tijaabinayo EQ qofka.
Aqoonyaahanadu waxa ay cadeeyeen in habka ay ragga iyo dumarku ula dhaqmaan dareenkoogu uu kala duwanyahay. Ragguna ay yihiin kuwa aan si wayn u dhagaysanin dareenka naftooda ilaa uu gaadho heer uu qarxo, halka ay dumarku inta badan xidhiidh wayn ay la leeyahiin qaybta maskaxda ee dareenka faraysa.
Aduunyadan aynu ku noolahay ee ku socota xawaaraha dheeraynaya waxa imika soo ifbaxaysa in qarnigan 21 xanuunada maskaxda ee dhibarashanku uu sii badanayo dadbadan oo shaqeeya oo aan waalayna ay yihiin kuwa qabo xanuuno maskaxeed uu dhibarashanku ugu badanyahay. Daniel waxa uu buugisan ku sheegay in aqoon iyo hab xidhiidh uu qofku u yeesho qaybta maskaxda ee dareenku ay kaalin wayn ka galayso ka hortagida xanuunada maskaxda sida dhibrashanka.
Buugan Emotionele intelligent run ahaantii waa buug aad u xiiso badan isbadal farabadana ku sameeyay aduunka tan iyo markuu soo baxay 1996. Waxa layaab ah in qaybo badan oo uu buugani ka hadlay iyo siduu uga hadlay ay aad ula mid tahay waxyaabo badan oo ay diinteenu ay hore inoogu sheegtay. Xitaa qoraaga buugani waxa uu si cad u tibaaxay in ducada iyo salaadu ay tahay habka ugu fiican ee lagu xadaynkaro dareemada maskaxdeena ka dhex socda. Waa mucjiso kale oo inoo cadaatay in aqoonyahana cilmiga nafsigu ay maanta inoo sheegayaan wixii uu 1400 sanadood ka hor uu Ilaahay (Sw) uu inoo soo faray rasuulkiisii (SCW). Waxa buugan iyo buugag kale oo badan ka cad in cudurada maskaxda ka dhashaa ay noqonayaan qarnigan kuwa ugu badan ee dadka dhibaatada u gaysta. Aminaaduna ay tahay habka qudha ee lagula dagaalami karo cuduradaas.
posted by abdi @ 12:10 AM 5 comments
posted by abdi @ 12:09 AM 3 comments
Waa sidee dhaqanka Soomaalida ku nool reer galbeed...
Google earth borograam aad u xiiso badan Socodka ...